अस्ट्रेलियाको भिसा सम्बन्धि नियम परिवर्तन, नेपालीलाई सहज की असर ?:: Naya Nepal
काठमाडौ । अस्ट्रेलियाले आफ्नो मुलुकका बासिन्दासँग विवाह गरी “पार्टनर भिसामा” आउन चाहने मानिसका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य पास गर्नु पर्ने तयारी गरेको छ । यो विवादित नियम संसदबाट पारित भएको अवस्थामा सन् २०२१ को मध्यदेखि अस्ट्रेलियामा पार्टनर भिसामा जान चाहने मानिसहरुले अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उनका अनुसार यो नियमले आफ्ना पार्टनरलाई नियन्त्रणमा राख्ने वा शोषण गर्नेजस्ता कार्य रोक्न पनि यसले सहयोग पुग्नेछ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मौरिसनले भने अस्थायी भिसामा अंग्रेजी परीक्षणको कक्षा पास नगरी आए पनि उनीहरुले अस्ट्रेलियामा अनिवार्यरुपमा अंग्रेजी कक्षा लिनुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा उनीहरुले स्थायी बसोबासको अनुमति पाउने छैनन् । बीबीसीबाट
ओली र प्रचण्डबीच अढाई घण्टाको बालुवाटार वार्तामा के–के भयो ?
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको भेटवार्ता सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पार्टी एकताका बाँकी काम, सरकारले गर्ने संवैधानिक नियुक्ति तथा राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रिमण्डल हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । उक्त छलफल करिब २ घण्टा ३० मिनेटसम्म चलेको थियो ।
दुईजना अध्यक्षबीच आज भएको छलफलमा खाली रहेका मन्त्रालयमा तत्कालै मन्त्री नियुक्त गर्ने र बाँकी काम तिहारपछि गर्ने भएको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
हाम्रो आँखाको नानी छोरी हराइन् : देख्नुहुनेसम्म पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोला !
कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला तिला गाउँपालिका वडा नं १ निवासि २५ बर्ष कि मिमा रावत गएको १४ गते रातिबाट आफ्नो घर परिवार लगायत आफ्ना सम्पुर्ण साथी भाइहरु बाट सम्पर्क बिहिन छिन् ।
आज आठ दिन बितिसक्दा पनि कुनै जानकारी नभएकाले भेटाउनु हुने वा कतै देख्नु हुने सम्पुर्ण व्यक्तिहरुले यहाँको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिन हुन हार्दिक आ्नुरोध गर्दछौ । हाम्री छोरी आँखाको नानी हुन् । घरमा त्यस्तो असहज परिस्थिती केही थिएन । कही कतै गएको शंकापनि छैन । नानी तिमि कही कतैको लोभ मोहमा फसेकी छौ ।
वा तिमिलाई बाध्य बनाएर कही राखिएको छ भनेपनि तिमी फुत्कीन सबै प्रयास चाल । हाम्री नानीलाई कोही कसैसँग वा कतै देख्नुभएको छ भने तत्काल सम्पर्क गरिदिनुहोस् । जो कोहीले देख्नुहुनेसम्म पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोला । मुन बहादुर बस्नेत :- 9866632728